एउटै कोठामा चार कक्षा, कसरी तयार होलान् भविष्यका कर्णधार ? | Rajmarga
एउटै कोठामा चार कक्षा, कसरी तयार होलान् भविष्यका कर्णधार ?
काठमाडौँ । बूढानीलकण्ठस्थित वेद विद्याश्रममा कक्षा कोठा अभावका कारण पढाइमा समस्या भएको छ । भूकम्पपछि पुनःनिर्माण हुन नसक्दा उक्त आश्रममा कक्षा कोठाको अभाव भएको छ । भूकम्पपछि भत्किएका कक्षा कोठाको निर्माण हुन नसक्दा अहिले एउटै कोठामा चार कक्षा सञ्चालन भएको विद्याश्रमका संरक्षक मठाधीश स्वामी निगमानन्दले बताउनुभयो ।
विसं २०५७ मा स्थापित उक्त विद्याश्रममा पूर्णरुपमा निःशुल्क पढाइ हुन्छ । हाल विद्यालयमा ३५ ब्राह्मण छात्र छन् । आठ शिक्षक तथजततउस्ररज्ञटछ।ज्ञ।द्दठ।द्दछण्रअबतभनयचथरष्लमभहरुअगचचभलतऋबत.द्द३ा एक शिक्षिका रहेको उक्त विद्यालयलाई शिक्षा मन्त्रालयले वार्षिक रु चार लाख सहयोग दिँदै आएको छ । – अनामिका फुयाँल, प्रशिक्षार्थी /रासस
Previous post: फास्ट ट्रयाकको डीपीआरबारे सेना- ‘कुरा नमिले आफैं बनाउँछौं’
Next post: एनआरएनलाई राजनिती भन्दा माथी उठ्न गैर आवासीय नेपालीको सुझाव